How to Quit your Job and Start a Business in 12 Easy Steps - Sicko News
Ma ka daashay shaqadaada? Ma dooneysaa inaad shaqadaada joojiso? Ma dooneysaa inaad ganacsi bilowdo? Mawaxaad dooneysaa inaad ka gudubto inaad noqoto shaqaale inaad noqoto ganacsade? Haddii jawaabtaada aad kahesho mid ka mid ah su’aalaha kore ay haa tahay, fadlan fadlan sii aqri maxaa yeelay waxaan soo bandhigayaa talaabada talaabo talaabo ee shaqada looga joojinayo oo aad shirkad furayso.
Maalin walba, waxaan la kulmaa shaqaalaha buka oo ka daalay shaqadooda. Maalin walba, waxaan la kulmaa ganacsatada iyo shaqaalaha rajo qabta malaayiin doollar laakiin uma muuqdaan inay leeyihiin raad ay ku joojiyaan shaqadooda sababtoo ah cabsi aan la garanaynin. Haddii mid ka mid ah xaaladaha kor ku xusan ay ku khusayso adiga, markaa adiga ayaa ah sababta aan u qoray maqaalkan.
Runtii Diyaar ma u tahay inaad Joojiso Shaqadaada?
Mid ka mid ah maalmaha ugu cabsida badan ee noloshaada waa markii aad qarka u saaran tahay inaad shaqadaada ka joojiso waxa runti aad u xiisaynayso. Joojinta shaqadaada runtii waa go’aan aad u adag in la sameeyo. Xaqiiqdii ma hubtid sida loo shaqeeyahaagu dareemayo markuu arko warqaddiisa is casilaadda, sidoo kale ma hubtid waxa kugu dhici doona markaad joojiso.
I rumaysta, waxaad ku jebin doontaa kun jeer laakiin waa tan ugu fiican. Dhamaan gunnooyinkaas, baaritaan caafimaad oo bilaash ah, kaararka hadiyadda ee ay shirkaddaadu siiso ayaa noqon doona wax la soo dhaafay. Ma jiri doono jeegagga mushaharka, caymiska caafimaadka ama xitaa qorshayaasha hawlgab.
Laakiin waa go’aan caqli badan oo aad qaadatay inkasta oo aad joojisid shaqadaada oo aad ganacsi bilawdid si aad adigu madax u noqotid. Hubso inaad diyaar u tahay inaad joojiso ka hor intaadan joojin. Inta badan dadka ka baqaya inay joojiyaan waxay ganacsi bilaabaan oo waxay saacado ku bixiyaan saacadaha shaqada ka dib iyo sidoo kale inta lagu jiro usbuuca dhammaadka.
Weligaa naftaada ma weydiisay sababta dadku u jecel yihiin inay uga shaqeeyaan shirkadaha waaweyn? Weligaa naftaada ma weydiisay sababta dadku uga joojinayaan shaqooyinkooda? Ha u oggolaan in shaqada lagaa joojiyo sababta oo ah qof kasta oo kale oo kugu xeeran ayaa joojinaya. Badanaa waa cabsida ah helitaanka dakhli joogto ah oo dadka ka celinaya inay ka baxaan shaqadooda inay ganacsi bilaabaan. Hadaad rabto inaad shaqadaada joojiso oo aad ganacsi bilowdo markaa qodobkaani adigaa kuu ah.
Kahor intaanan u dhaqaaqin dariiqa faahfaahsan ee shaqada looga tagayo oo aad ganacsi bilowdo, waxaan rabaa inaan shaqsi ahaanteyda u qirto lataliyahayga “Robert Kiyosaki” dhiirigelintiisa. Buuggiisa “Taajirnimada Aabbihii Kahor Intaadan Jirin Shaqadaada: 10 Casharro Nolosha Nolosha ah Qofkasta oo Ganacsade ah Waa inuu Ka Ogaadaa Dhisida Ganacsiyo-Malaayiin Doollar ah” wuxuu bixiyay tusaha ugu muhiimsan ee qoritaanka maqaalkan waxaanan shaqsiyan kugula talinayaa inaad akhrido buugga haddii aad runtii ka dhab tahay Joojinta shaqadaada. Hadda sideed shaqadaada uga tagaysaa sidii maamule oo aad ganacsi u bilowdaa?
Sida Loo Joojiyo Shaqadaada oo Aad Bilaabato Meherad 12 Talaabo Fudud
1. Maxaad u dooneysaa inaad shaqadaada joojiso?
Haa, tani waa su’aasha ugu muhiimsan uguna muhiimsan ee ay tahay inaad ka jawaabto. Maxaad u dooneysaa inaad shaqadaada joojiso? Maxaad u dooneysaa inaad ganacsi bilowdo? Waxaan maqlaa dad badan oo u barooranaya inay shaqada ka tagayaan sababta oo ah way ku daaleen.
Inaad ku daashay shaqadaada sabab macquul ah maaha inaad shaqada joojiso maxaa yeelay ma bixinayso dhiirigalin kugu filan oo kaa aragto hawsha. Si aad si guul leh shaqada uga tagto oo aad ganacsi u bilowdo, waxaad u baahan tahay sabab xoog badan; Sababta adiga kugu arki doonta waqtiyada mugdiga ah. Hadda xaqiiqdii kuma sheegi karo sababta aad shaqada uga joojineysid; taas ayaa kaaga hadhay inaad jawaabtid.
2. Ku shaqee fikradahaaga ganacsi
Sideen ugu shaqeeyaa figradayda ganacsi? Kahor intaadan joojin, ka shaqee fikradahaaga ganacsi oo weydii naftaada haddii meheraddaadu tahay mid la taaban karo. Qoyskaaga iyo asxaabtaada ayaa u imaan lahaa si wanaagsan halkan, iyagoo weydiinaya waxay u maleynayaan inay runtii caawin doonaan. Marna ma sheegi kartid inay leeyihiin saaxiib ama saaxiib wehel kuu ah oo kaa saari kara ama ku siin kara talo aad u wanaagsan.
Qoyska qaarkood ama asxaabtaadu ma doonayaan inay qalbi jabin doonaan markay kuu sheegaan in ganacsigu ahayn mid la taaban karo. U sheegida saaxiibkaa saaxiibkaaga ah inuu ku hawlan yahay ganacsiga waa habka ugu wanaagsan ee looga helo jawaab celin daacad ah iyaga. Waa inaad sameysaa baaritaan badan oo ku saabsan meheraddaada si aad u hubiso ganacsiga aad damacsan tahay inaad ka faa’iideysato wuxuu noqon doonaa mid faa iido u leh oo aad diyaar u tahay inaad qatarta ku qaadatid.
Ma dooneysid inaad dhamaadka aad ugu laabatid shaqo-bixiyahaaga markii aad shaqada joojiso, miyaad? Tani waxay ku dhacday dad badan. U diyaarinta qorshahaaga ganacsi oo aad qortid waxyaabo muhiim ah oo gacan ka geysan doona ganacsigaaga, waxay ku tagi doontaa wado dheer si ganacsigaagu u noqdo mid guuleysta. Waxaad dhahdaa maya jeegagga mushaharka, caymiska caafimaadka iyo fasaxa lacag bixinta. Ma dooneysid inaad waxaas oo dhan u sameysid wax aan micno lahayn. Ka shaqee ganacsigaaga, ha ku dhex jirin.
3. Qorshee xeeladdaada bixitaanka
Ka dib markii aad heshid sabab fiican oo shaqadaada looga joojiyo, waxaad u baahan tahay inaad qorsheyso istiraatiijiyadda aad ku joojiso. Ma waxaad uga bixi doontaa keydkaaga? Ma haysaa gundhig maal gashi? Kadib markaad shaqadaada joojiso, maxaa xiga? Ma waxaad u fadhinaysaa inaad guriga fadhiisto, shaqo kale hesho ama ganacsi bilowdo? Kuwani waa su’aalo waa inaad ku siisaa jawaab ku saabsan oo qorshe u jeedaa.
Hadda haddii aad raadineyso shaqo kale, markaa maqaalkani waxtar uma yeelan doono adiga. Laakiin haddii aad damacsan tahay inaad ganacsi bilowdo ama ganacsi aad adigu iskaa iska leedahay
ka dib markaad shaqadaada joojiso, ka dib waa inaad qorshaysaa dhinaca maqaalkani wuxuu kuu noqon doonaa mid adiga ku caawiya. Hadda sidee u bilaabeysaa ganacsi ka dib markaad shaqadaada joojiso? Waxaan kuu soo jeedin doonaa inaad ka sii akhrisa.
4. U diyaari maskaxdaada
Kala-guurka ka-noqoshada shaqaale oo noqoshada ganacsade ma aha oo keliya beddelka shaqada ama shaqada; waa isbedelka qiimaha aasaasiga ah, isbedelka hanuunintiisa. Waa kala guurid laga soo bilaabo hoosaad hoosaad ilaa in si buuxda mas’uul looga noqdo wax walba. Waa isbadal la yimid waxoogaa yar oo khatar ah iyo kalsooni darro.
Tani waa sababta aan kuugu xoojinayo inaad maskaxdaada diyaariso. Joojinta shaqadaada iyo noqoshada ganacsade macnaheedu waa inaad dhiibto amnigaaga si aad ugu biirto nolosha shaki la’aan. Si aad ugu guuleysato inaad noqoto ganacsade, waa inaad diyaar u noqotaa inaad siiso meheraddaada tallaalka ugu fiican; intaad wali naftaada u diyaarinayso inaad wax ka qabato fashilka.
5. Falanqee awoodahaaga iyo daciifnimadaada
Maxaad ku fiicantahay? Maxay shaqaalahaaga aad noogu amaaneysaa? Waa maxay dabeecaddaada ku kallifaysa madaxaaga? Xirfado noocee ah ayaad leedahay? Ma haysaa hiwaayad, hammi ama hibo? Haddii aad jawaab macquul ah ka qabtid mid ka mid ah su’aalaha kore, markaa waxaad ku socotaa wadada aad ku bilaabi laheyd ganacsi kuu gaar ah. Sababta aan u leeyahay tan waa sababta oo ah waxaan arkay shaqaalaha oo ka tagaya shaqooyinkooda si ay ganacsi uga dhistaan ​​damacooda oo ay ku guuleysteen guul weyn. Hadday awoodaan, adiga laftiina waad awoodaa.
6. Tag Baadhitaan Caafimaad
Ogaanshaha gobolka caafimaadkaaga aad ayuu muhiim u yahay ka hor intaadan shaqadaada joojin. Bilaabida shirkad ma ahan wax fudud oo dhan, maaraynta waa mid aad u adag. Waxaad ka faa’iideysan kartaa qorshooyinka caafimaadka ee shirkaddaada si aad u ogaatid oo aad u xalliso wixii dhibaatooyin caafimaad ah inta aad weli awoodid. Markaad baxdo, waxaa laga yaabaa inaadan ku raaxeysneyn bixinta biilasha caafimaadka maxaa yeelay tani waxay daadineysaa boorsadaada, oo xusuusnow inaadan helin wax dakhli daggan muddo.
7. Xaqiiji Deganaansho Maaliyadeed
Hubso in aadan jabinin goortaad shaqadaada joojiso maxaa yeelay ma heleysid wax mushaaraad ah in muddo ah, waxay noqon doontaa adiga iyo shaqadaada. Halkaan ayaa ah halka keydkaagu kuu badbaadiyo. Markaad wali shaqaaleyso, hubi inaad gaadhay heer xasillooni dhaqaale.
Sababta ugu weyn ee sababta bilaabayaashu u xirayaan ganacsigooda badanaa waa natiijo ka timid maalgelin la’aan. Kuuma hadleyso inaad si fiican uhadashid meheraddaada oo aad xidho wax ka yar 6 bilood.
Ma dooneysid in laguugu yeedho fashil ama khasaaro, miyaad tahay? Si otomaatig ah lacag baa loogu shubaa akoon aan ku xirnayn keydintaada caadiga ah iyo ka noqoshada inta aad weli shaqeyneyso waxay kaa caawin doontaa inaad dhaqaale ahaan fiicnaatid markaad shaqadaada joojiso. Maskaxda ku hay in lacag la’aantu tahay dilaa ganacsi.
8. Safka gali waxyaabaha aad higsaneyso
Marka go’aanka la gaadho ka tagista shaqadaada la sameeyo, isku xirnaanta rajooyinkaagu waa inay ahaadaan waxa ku xiga ajendahaaga. Waa inaad diirada saartaa oo naftaada siisaa tilmaan. Weydii naftaada badanaa intaad u jeedo, sidaan waad hubtaa inaad jawaabta hesho horana aad u ogaatid halkaad u socotid, ayaa ka sii fiican.
Waxaad dadka ula xiriiri kartaa tababar caadi ah maxaa yeelay tani waxay kaa caawin doontaa wax badan. Meheraddaadu waxay hubtaa inay tahay guul markii aad soo dejisay rajooyinka, in kasta oo ay jiraan waxyaabo kale oo ka dhigaya ganacsiga mid inuu guuleysto.
Barashada jadwalka jadwalka sidoo kale waa mid aad muhiim u ah inta aad weli shaqeyneyso maxaa yeelay waxaad sameyn laheyd waxbadan oo tan ah markaad bilowdo meheraddaada. Haddii aadan aqoon u lahayn inaad maamusho waqtigaaga, bilaabida meherad way adkaan lahayd; inkasta oo tobankiiba mid ka mid ah dadka aad ugu liita waqtiga maamulka ay awood u yeesheen in ay riixaan.
Waxaad baran kartaa waxkastoo kaliya haddii aad maskaxdaada iyo naftaada geliso. Dad badan oo ganacsato ah oo maanta qatarta u galay inay ka baxaan shaqadooda si ay u noqdaan madax u gaar ah ayaa soo maray waxyaabo badan. Hubso inaad diyaar u tahay tan kahor intaadan joojin.
9. U deji waqti bartilmaameed si aad shaqadaada uga joojiso
Goormaad damacsan tahay inaad shaqadaada joojiso? Tani waa su’aal waa inaad ubaahantahay jawaab cad. Haddii aadan haysan waqti go’an oo aad shaqadaada uga baxdid, markaa weligaa ma noqon doontid inaad shaqo-joojiso. Dejinta waqti cayiman oo aad ku joojiso waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxay ku siineysaa hadaf; waxay ka warbixineysaa diiraddaada waxayna kuu dejineysaa howl.
10. Bilaab ganacsi waqti dhiman
Inta badan dadka doonaya inay ka tagaan shaqadooda waxay si fudud ula socdaan madaxdooda oo ay diraan warqad iscasilaad. Hagaag, habka noocan ahi waa mid geesi ah oo muuqaal leh laakiin waxa laga yaabaa inuu is dilo haddii aadan haysan wax aad dib ugu dhacdo. Kahor intaadan shaqadaada joojin, waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore tijaabiso biyuhu. Ha uga tagin shaqadaada si qarsoodi ah rajada beenta ah. Jooji aasaas adag; shaqadaada uga tag dariiq la tijaabiyey oo la xaqiijiyay.
11. Ku dheji hawsha
Ku dhejinta geedi socodka ayaa ah waxa ka dhigaya farqiga weyn ee u dhexeeya ganacsatada guuleysta iyo ganacsatada ku noqota shaqadooda shaqaleysa. Waa inaad sanado ahayd shaqaale; markaa ha u maleynin inaad ku boodi doonto adduunka meheradda oo aad ku dhufan doonto guul dhakhso leh. Waxyaabaha si uun uma shaqeeyaan.
Si aad si guul leh uga baxdo shaqadaada oo aad ganacsi u bilowdo, waa inaad maraysaa meesha laga galo
how to How to Quit your Job How to Quit your Job and Start a Busines How to Quit your Job and Start a Business How to Quit your Job and Start a Business in 12 Easy Steps How to Quit your Job and Start a Business in 12 Easy Steps4